Internet Essentials: Sida loo Codsado
Keen guriga qarash-hooseeye,
Internet Essentials waxay kuu soo bandhigaysaa Intarneedka guriga, oo qarash-hooseeya, xawlina-sarreeya si aad markaas wax walba ugu diyaar garawdo! Xiriirisyadayadu hadda waa labo jibbaar xagga dhoqsaha laakiin qarash hoosayntu waa is la sidii. Internet Essentials, waxaad ka filataa xiriirin la isku hallayn karo taas oo aaladahaaga siinaysa xawliga ay u baahan yihiin. Waxaad ku shaqayn kartaa oo wax ku baran kartaa gurigaa, filimmo qulqula iyo bandhigyo, muusik soo-doojin, iyo samayn ku-wicitaano fiidiyo aalado baddan - dhammaan isku waqti.
Raac tillaabooyin-kayaga afarta ee fudfudud ee hoose dhawaan baad xiriirsami doontaa oo wax walba diyaar u noqon doontaaye!
Codso maanta haddii adigu:
Tayada barnaamijyada sida Qadada Dugsi Qarameedka, kaalmaynta guriyeynta, Medicaid, SNAP, SSI, Deeqda Pell ee Fedaraalka, iyo kuwo kale